साताको चौथो कारोबार दिन आज नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्यमा गिरवाट आएको छ ।
समाचार तयार पर्दा सम्म कम्पनिको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ९ दशमलभ ३४ प्रतिशतले घटेको छ । शेयरमूल्यमा गिरवाट आएसंगै कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. २ हजार ७ सय ३० पुगेको छ ।
अघिल्लो कारोबारको दिन कम्पनीको रू. ३ हजार ११ दशमलभ ४० मा अन्तिम कारोबार भएको थियो। कम्पनीको शेयरमा विक्रेता भन्दा क्रेता थोरै भएकाले शेयरमूल्य घटेको हो । मार्केट डेप्थमा हेर्दा कम्पनीको शेयरमा ९ हजार ३ सय ८८ कित्ता शेयर खरीद माग रहेको छ भने २३ हजार ९ सय ६५ विक्री माग रहेको छ ।